41,9% ny taha eto Madagasikara : misoroka fahafatesan-jaza 823 000 isan-taona ny fampinonoan-dreny | NewsMada
41,9% ny taha eto Madagasikara : misoroka fahafatesan-jaza 823 000 isan-taona ny fampinonoan-dreny
Miaro ny zaza vao teraka amin’ny aretina ny nonon-dreny no sady sakafo ampy ho amin’ny fitomboany hatramin’ny fahenim-bolany, araka ny fanadihadiana natao. Mandrisika ny reny rehetra hampinono tsy misy fangarony ho an’ny zaza vao teraka ho an’ny enim-bolana voalohany ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS). Tokony hotohizana hatramin’ny faharoa taon’ny zaza ny fampinonoana.
Eto amintsika, mampinono ny ankamaroan’ny reny (98%). Tsy voahaja anefa ny nonon-dreny tsy misy fangarony hatramin’ny fahenim-bolany. Ny 24%-n’ny zaza, omen’ny reny sakafo hafa raha vao teraka, ary ny ampahatelony kosa, mihinana sakafo hafa sahady raha vao feno telo volana monja.
41,9% ny tahan’ny fampinonoana tsy misy fangarony (fanadihadiana Ensomd 2012-2013) ho an’ny reny malagasy raha tokony ho fihetsika voajanahary sy arahin’ny reny miteraka rehetra. Raha voahaja anefa ny fampinonoana tsy misy fangarony ao anatin’ny enim-bolana, mihena 9% ny taham-pahafatesan’ny zaza latsaky ny 5 taona.
Azo isorohana fahafatesan-jaza 823 000 isan-taona ny fampinonoana ary miaro aretina mpahazo ny ankizy ihany koa (fanadihadiana Lancet 2008).
Miasa avokoa ny reny, mihena ny fampinonoan-dreny
Antony mitarika ny fampidirana ny ronono vovony tsy voajanahary ho an’ny zaza ny reny miasa matetika. Raha hanohy hiasa izy aorian’ny fiterahana, toron’ny mpitsabo hevitra avy hatrany hanome ronono vovony ny zaza farafaharatsiny indray mandeha isan’andro hizarana azy sahady. Fomba iray hidiran’ny otrikaretina ao amin’ny vatan’ny zaza ny fanomezana ronono vovony rehefa tsy araka loatra ny fahadiovana eo amin’ny fitaovana sy ny fikarakarana rehetra. Marihina amin’ity herinandro ity ny fampinonoan-dreny tsy misy fangarony. Isika rehetra no hanohana, hiaro ary hampiroborobo ny fampinonoan-dreny ny lohahevitra voizina amin’ny fanentanana samihafa. Anisan’ny paikady iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mpahazo ny zaza ny fampinonoan-dreny tafiditra amin’ny drafitrasam-pirenana ho an’ny fanjarian-tsakafo 2017-2021.